MUQDISHO, Soomaaliya - Diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa duqeysay saldhig weyn oo lagu tababaro dagaalayahanada Al Shabaab kaasi oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya.
War kasoo baxay Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa lagu xaqiijiyay weerarka, kaasi oo dhacay Axadii lasoo dhaafay, 24-ka December meel aysan magacaabin oo ku yaalla duleedka Kismaayo.
AFRICOM ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay 13 katirsanaa Al Shabaab, mana jirin wax khasaaro ah oo kasoo gaarey dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanka ay diyaaradaha gantaallada ku garaaceen.
Saraakiisha Jubbaland iyo Al Shabaab kama aysan hadlin howlgalka Mareykanka.
In ka badan 34 weerar oo dhanka cirka ah ayuu Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya tan iyo bishii Maarso markii uu Trump bixiyay amar lagu kordhinayo duqeymaha ka dhanka ah Kooxaha mintidinta ee Al Shabaab iyo kuwa xiriirka la leh Daacish ee ku sugan Puntland.
Mid kamid ah duqeymahan waxuu Mareykanka la eegtay bishii November Daacish-ta Soomaaliya ee ku sugan Buuraha Galgala, ee gobolka Bari.
Bil kahor, duqeyn diyaaradeed oo AFRICOM ka gaystay gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxuu Pentagon-ka xaqiijiyay inay ku dhinteen 100 kamid ahaa Al Shabaab.
Ciidamo Mareykanka ah oo lagu weeraray duleedka Kismaayo
Soomaliya 06.06.2018. 22:40
Hogaamiye katirsan Daacish lagu dilay Duqeyn ka dhacday Soomaaliya
Puntland 28.11.2017. 20:54